युगसम्बाद साप्ताहिक - राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार
Wednesday, 11.13.2019, 06:44pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 06.09.2015, 12:04pm (GMT+5.5)
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हरेकपटक राहत सामग्रीमा अनियमितता गर्नेलाई कुनै हालतमा छोड्दिन भन्नुहुन्छ तर गर्न केही सक्नुहुन्न । प्रधानमन्त्री कोइराला कडा कारबाही गर्ने भन्दै बस्ने र राहत सामग्री बेच्नेले बेचिरहेका छन् । जस्तापाता, ब्लांकेट, त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधि लगायतका सामग्रीहरू बजारमा भेटिएका छन् । अर्कोतिर जनताको बास बनाउन चाहिने जस्तापाता, किलाकाँटामा कालो बजारी चलेको छ । मूल्य आकाशिएको छ । वर्षायाम सुरु हुन लागिसक्दा पनि घरबारविहीनहरूका लागि बासको भरपर्दो व्यवस्था हुन सकेको छैन । आएको राहत सामग्रीको समेत समुचित वितरण हुन नसकेको घटना त पुरानो भैसक्यो ।
नेपाल विग्रेको भ्रष्टाचारले हो । यहाँ कुनै निकायका कसैमाथि पनि विश्वास गर्न नसकिने स्थिति छ । गृह मन्त्रालयबाटै ५७ हजार वटा ब्लांकेट गायब हुनु भनेको सानो कुरा हैन । भन्सारबाट ५९ हजार थान चलानी हुने त्यो सामानको गृह मन्त्रालयबाट विवरण आउँदा २ हजारको मात्रै आउने । यो प्रसंगले नेपालस्थित बंगलादेशी दूताबास पनि चकित परेको छ । यस्ता घटनाले के देखाउँछ भने नेपालका भूकम्प पीडितहरूले सजिलै पुनर्बास पाउन सक्नेछैनन् । आएको राहत सामग्री भ्रष्टाचारीहरूको कब्जामा हुने भएपछि जनताले के पाउने ? यी घटनाक्रमहरूले विदेशीले सरकारलाई पैसा दिन किन आनाकानी गरिरहेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । कतै यो विदेशीलाई चलखेल गर्न दिने मेसो त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपाल आफैंले गर्न सक्दैन तर विदेशीको सहयोग आफ्नो स्वाभीमान बचाएर लिनुपर्छ । उनीहरूलाई आफूखुसी खर्च गर्न दिनुहुँदैन । के यसो भन्दैमा उनीहरूले सरकारी ढुकुटीमा पैसा खन्याउनेछन् त ? पक्कै खन्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हरेक वर्षको प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वप्रति विदेशीको विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरू आफूखुसी खर्च गर्न चाहन्छन् । तर त्यो नेपालका राष्ट्रिय स्वाभीमानका लागि घातक हो । सरकार आएका सामग्रीको व्यवस्थापन र वितरण गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन भने अब भूकम्प पीडित दशौं लाखको उद्धार कसरी होला ? आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको प्रयोगमा पटक्कै ध्यान नदिने अनि हरेक कुरामा विदेशीको मात्र भरपर्ने गलत प्रवृत्तिको परिणाम जनतामा पराश्रयी चिन्तनको विकास भैरहेको छ । विदेशीको मात्र भरपर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै खेलवाड भएको कुरा त वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि आएका विदेशी उद्धार टोलीले देखाएको हरकतबाटै प्रष्ट हुन्छ । यस्तोमा विदेशीले अरु बढी खेल्न पाउने गरी उनीहरूले दिएको राहतमै ब्रह्मलुट मच्चाएपछि विदेशीले अरु खेल्ने मौका पाउने भए । विदेशी शक्तिले पुनःस्थापन र पुनः निर्माणमा सरकारले चाहेअनुरुप सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने हौवा खडा गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अगाडि सारेर वा प्रत्यक्ष रुपमा आफैं संलग्न भएर चलखेल गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरू त्यस्तै कार्यका लागि मलजल गरिरहेका छन् । राहतमै भ्रष्टाचार गर्न थालिएपछि राष्ट्रको प्रतिष्ठा कहाँ पुग्ला ?
त्यसैले त जानेर वा नजानेर कोइराला सरकारले एकद्वार प्रणालीको कुरा गरिरहेको छ । दाताहरूलाई यो कुरा पचेको छैन । उनीहरू कसरी नेपालमाथि हैकम जमाउने भन्ने योजनामा छन् । मुलुकका कर्ताधर्ताहरू त्यस्तो अवसर नै नदिने गरी काममा खटिनुको साटो उनीहरूकै अभीष्टलाई मलजल गर्ने वातावरण तयार गरिरहेका छन् । विदेशीले लगाउने गरेको आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारको आरोपलाई पुष्टि गर्ने काण्डको रचना त अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतका स्वकीय सचिवबाट र गृह मन्त्रालयबाटै भएको घटना उजागर भैसकेको छ । यिनै घटनाहरूले पनि सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा विश्वसनीयता गुमाइसकेको अवस्था छ ।
मुलुक भूकम्पको पीडाले छटपटिए पनि नेताहरूलाई कसरी कुर्सी हत्याउने भन्ने ध्याउन्न मात्र छ । कसरी एकताबद्ध भएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने भन्ने योजना बनाउनुको साटो यसैको नाममा सत्तारोहणको आकांक्षा प्रवाहित भैरहेको छ । त्यसैको जगमा एमाले प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आँखा गाडेका छन् । प्रश्न कहाँनेर हो भने के अब आउने सरकारको नेतृत्वले सबै काम इमानदार भएर पारदर्शी र विश्वसनीय रुपमा गर्न सक्छ । सक्छ भन्ने दावी गर्नेहरूले त्यसको आधार दिन सक्छन् ? सक्दैनन् । किनभने अहिले सत्तामा जान खुट्टो उचालेर बसेकाहरू कुनै न कुनै रुपमा सत्तारुढ भैसकेका छन् र उनीहरूको कार्यक्षमता पनि देखिइसकेको छ । त्यसैले यतिबेला मुलुकलाई चामत्कारिक निर्णय र गति लिनसक्ने सरकारको आवश्यकता छ । पात्र फेरिने सरकार हैन । अनि राहत सामग्रीमा र्याल चुहाउनेहरूको कुकर्मलाई टुलुटुलु हेर्ने सरकार पनि चाहिएको छैन ।